Miyey diyaar u noqon doonaan xiddigaha Alisson iyo Fabinho kulanka soo socda ee Chelsea? Tababare Klopp ayaa ka jawaabaya – Gool FM
(Liverpool) 01 Maarso 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa shaaca ka qaaday go’aankiisa kaga aadan haddii ay labada xiddig reer Brazil ee Alisson Becker iyo Fabinho ka qeyb qaadan karaan kulanka soo socda ay Chelsea ku wada ciyaari doonaan horyaalka Premier League.
Labada xiddig reer Brazil ee Alisson Becker iyo Fabinho ayaa seegay kulankii ay xalay Liverpool kaga adkaatay Sheffield United horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Sheffield United oo ay ku booqatay garoonka Bramall Lane, kaddib markii ay kaga so adkaatay 0-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Haddaba Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ciyaarta kaddib u sheegay warbaahinta:
“Alisson Becker iyo Fabinho, waxaan hubaa inay diyaar noqon doonaan.”
“Dhanka Diogo Jota, wuxuu nala joogay hoteelka, laakiin wuxuu dareemay daal waana u ogolaanay inuu aado gurigiisa, waxay ku xirantahay sida dhaqsida leh uu ku soo kabto.”
Garoonka Anfield ayaa martigelin doona kulanka dhex mari doono kooxaha Liverpool iyo Chelsea, Khamiista soo socota, xilli kulankan uu qeyb ka yahay horyaalka Premier League, Reds ayaa hadda ku jirta booska 6-aad kala sareynta horyaalka iyadoo leh 43 dhibcood, halka Chelsea ay ku jirto kaalinta 5-aad waxayna leedahay 44 dhibcood.